Ngaba unyana wam urhona kakhulu | Oomama Namhlanje
Kutheni unyana wam erhona kakhulu?
UAlicia tomero | 14/06/2021 10:00 | Iingcebiso, Unonophelo, Intsapho, ZeMpilo
Isizathu sokutyelelwa kwabantwana okuninzi kunxulumene noomama abanenkxalabo kuba Unyana okanye intombi yakho iqala erhona ebusuku. Akukho sizathu sothuswa, njengoko kuyinto eqhelekileyo ukuba umntwana arhona ngexesha elithile ebuntwaneni.
Ukurhona kubangelwa sisandi esenziwa ngumoya njengoko udlula kummandla wephecana eliphezulu. Njengoko lo mmandla unciphile umoya ungangcangcazela uvelise loo ngxolo, ke kuya kufuneka ukuba uhlalutye esona sizathu siphambili sokubonakaliswa kwayo.
1 Kutheni umntwana wam erhona kakhulu?
2 Ukukhathazeka nini xa umntwana erhona?
3 Izisombululo zotyando kunye nongenelelo
Kutheni umntwana wam erhona kakhulu?
Uninzi lwabantwana abarhona bahlala bejamelene nomzuzu we-catarrhal, ke xa bephinda barhola inyamalala. Kuqhelekile ukubona abantwana abarhona ngokusisigxina ukuze babenako Hlalutya izizathu zokuba ivela phi.
Izizathu eziqhelekileyo ezingafikeleli kwindawo enkulu kuba zezokwexeshana zezi: xa zinokuxinana kwempumlo, ukubanda okanye imeko yokudlula ephezulu yokuphefumla. Xa urhona kukhatshwa ngu ukuphefumla (ukuphefumla ubuthongo) emva koko kufuneka sibonise isizathu sokulumkisa xa kukho into ephazamisa indlela yabo yomoya.
I-Adenoid kunye neetoni yehypertrophy inokuba sesinye isizathu esenza ukuba kube nzima ukuphefumla kwabantwana, ukubanyanzela ukuba baphefumle ngomlomo wabo Ngenxa yokuba nenkalakahla ephezulu, umchamo kunye nokupakisha okuqhubekayo kwempumlo okunokubangela ezinye iintlobo zosulelo ezinje nge-otitis, sinusitis okanye i-tonsillitis, oko ke kubangela ukurhona.
Kule meko yokuthintelwa kufuneka ukubhenela kutyando lokususa ii-adenoids kunye / okanye iitoniUkucoca umendo ophezulu kunye nokulala okungcono kumntwana, ukuvumela ukulala ngokuzolileyo.
Ukuthimliswa komzimba Ngomnye woonobangela abaqhelekileyo kunye nokuphambuka kweseptum yempumlo. Kwimeko ye-rhinitis, unyango olusekwe kwiziyobisi luya kusetyenziswa phelisa i-mucus kwaye ukhulule iimpawu. Ezinye iingxaki ezinokuthi zidibane kuxa abantwana besokola i-reflux yegastroesophageal okanye bangabatshayi nje.
Ukukhathazeka nini xa umntwana erhona?
Ngenxa yeempawu zenkqubo ye-catarrhal siyayazi loo nto umntwana uza kurhona okwethutyana, Ngumcimbi weentsuku ukubona ukuba xa kususwa i-mucus, ukurhona kuya kuyeka. Nangona kunjalo, ukuba esi siganeko sihlala ixesha elide, uyaqaphela ukuba uyeka ukuphefumla imizuzwana (i-apneas) okanye ukuba ufumana indawo ezingaqhelekanga zokulala, sinokuthetha ngokwenza isifundo kwi ukulala kwe-apnea-hypopnea syndrome (SAHS).
Umntwana usenokuba unesifo se- ukudinwa okuvela kukungalali, kuba ulele ngokungalunganga. Ngesi sizathu unokufumana ukudinwa okukhulu ekuhambeni kwexesha, uvuka udiniwe, awunakuphumla imini yonke kwaye unengxaki yokujonga.
Izisombululo zotyando kunye nongenelelo
Ukuba umntwana ufunyaniswe ene-adenoid kunye ne-tonsillar hypertrophy awuyi kuhlala ufuna utyando. Kwimeko yabantwana abaneminyaka emi-5 ubudala, la malungu makhulu kakhulu kwaye kule minyaka iyancipha.
Kuya kuthathwa imbali yezonyango kwaye uya kuwavavanya ngokucokisekileyo amalungu akho omlomo. Ukuba kukho urhano lwe-adenoid hypertrophy, uvavanyo luya kwenziwa apho u-Otolaryngologist athunyelwa khona. Kwezi meko kwenziwa isifundo sokulala, ukuhlalutya indlela olala ngayo Ukulandelelwa kweklinikhi ngobusuku bonkeNokuba sesibhedlele, okanye ekhaya.
Uvavanyo lomsebenzi luya kwenziwa ngokukodwa kumntwana ngamnye. Ukuba unezifo ezininzi eziphindaphindayo, isithintelo sokuphefumla kunye ne-apneas, kunye nokungalungelelanisi kwamazinyo, kuya kufuneka utyando.
Umsebenzi Iya kuba nemizuzu engama-15 ukuya kwengama-30 yongenelelo. I-ENT izakususa inxenye yeetoni zakho kunye neeadenoids ukuze umoya ngoku ujikeleze ngaphandle kobunzima. Emva kweeyure ezingama-24 umntwana uyakhululwa kwaye angaphila ubomi obuqhelekileyo.
Ukuqukumbela kolu hlobo lwesihloko kusulelo lokuphefumla sinokufunda malunga neemeko ze tonsils ebuntwaneni, Ezizi Iimpawu pharyngitis kwaye injani i yencindi phakathi kwempumlo emlonyeni ebantwaneni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Intsapho » Kutheni unyana wam erhona kakhulu?
Amawele: Ndawonye okanye ngokwahlukeneyo kwiklasi?
Iiresiphi ezi-3 zokuya kwipikniki ehlotyeni